Maxaabiis Xannuunka Shuban Biyoodka Ugu Geeriyooday Xabsiga Burco - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Maxaabiis Xannuunka Shuban Biyoodka Ugu Geeriyooday Xabsiga Burco
Hargeysa (ANN)- Laba maxbuus oo ka mid ahaa dadka ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Burco ee xarunta Gobolka Togdheer ayaa u geeriyooday xannuunka Shuban-biyoodka, halka ku dhawaad 60 qof oo kalena uu soo ritay cudurku.
Wasaaradda Caddaaladda Somaliland, ayaa xaqiijisay in laba maxbuus oo uu ku dhacay xannuunka Shuban-biyoodku ku dhex geeriyoodeen xabsiga Burco shalay, sidoo kalena uu haleelay 54 kale oo ka mid ah maxaabiista iyo 5 askari oo ka tirsan ciidan Asluubta ee ilaalada ka ah xabsigaasi.
Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Caddaaladda Jamhuuriyadda Somaliland Md. Khadar Axmed Diiriye oo war qoraal ah ka soo saaray dhacdadan waxa uu sheegay in gurmad degdeg ah oo ay qaadeen Wasaaraddiisa iyo Caafimaadka oo kaashanaya hay’adda bisha Cas lagu guulaystay in la xakameeyo fiditaanka xannuunka Shuban-biyoodka ee ka dillaacay xabsiga dhexe ee magaalada Burco.
Warsaxaafadeedka Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Caddaaladda oo faahfaahsanina waxa uu u dhignaa sidan; “Laba maxbuus oo cudurka shuban-biyoodka ugu geeriyooday xabsiga Burco iyo 54 maxbuus oo kale iyo 5 askari oo cudurkaas u jiifa.
Saaka Axaddii 28.05.2017, waxa xabsiga magaalada Burco cudurka Shuban-biyoodka ugu geeriyooday laba maxbuus oo ka mid ahaa maxaabiista xukuman ee xabsiga ku jirta.
Cudurka shuban-biyoodka oo meelo badan oo waddanka ka mid ah hore uga dillaacday, waxa calaamadaihiisa lagu arkay xabsiga Burco markii ugu horreysay shalay Sabtidii, 27.05.2017. Ilaa hadda waxa uu cudurku soo ritay oo u jiifa afar iyo konton maxbuus oo ka mid ah laba boqol iyo toddobaatan maxbuus oo xabsiga ku jira iyo shan askari oo ka tirsan ciidanka Asluubta ee xabsiga Burco.
Iskaashi degdeg ah oo ay wadajir u sameeyeen Wasaaradda Caddaaladda, Wasaaradda Caafimaadka, Ciidanka Asluubta, Xeer-ilaalinta Gobolka Togdheer iyo hay’adda ICRC, waxay ku guulaysteen in ay hakiyaan fiditaanka cudurkaas, iyada oo la raacayo dhammaan habkii xakamaynta cudurka shuba-biyoodka.
Dhammaan shaqaalaha iyo dhakhaatiir ka hawlgalaysa xabsigu, iyaga oo hawshaas sii wada waxay dedaal ugu jiraan xakamaynta cudurka, si looga badbaadiyo inuu ku sii dhex faafo maxaabiista kale ee weli aannu cudurku saamaynta ku yeelan.”